Men – Healthy Life Journal
ကိုယ်ဝန်နဲ့ သုက်လွှတ်ခြင်း (Pregnancy and Ejaculation)
လိင်ကိစ္စကို ဟန့်တားနိုင်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ
မြန်မာပြည်မှာ ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid-19) ဘာကြောင့် မဖြစ်သေးတာလဲ . . .
၀ူဟန်ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးအတွက် နှာခေါင်းစည်း အသုံးပြုသူတို့ မလုပ်သင့်သည့် အမှား (၅) ခု
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဝူဟန်ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေ ဝင်ရောက်ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါရှိသူ ချောင်းဆိုးတာ၊ နှာချေတာ၊ နှာရည်ညှစ်တာ၊ ထွက်လာတဲ့ တံတွေးနဲ့ သလိပ် စတာတွေကတစ်ဆင့် ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေမကောင်းသူက ချောင်းဆိုး၊ နှာချေတဲ့အခါ လက်ကိုင်ပဝါ၊ တစ်ရှူး...
အရက်သောက်ခြင်းက ဝူဟန်ကော်ရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်တွန်းလှန်ပေးနိုင်မှာလား . .
၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်၊ အခုအခါမှာ ဝူဟန်ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သူဦး ရေက တရုတ်နိုင်ငံမှာ တစ်ထောင်ကျော်ရှိလာပြီး သေဆုံးသူ ဦးရေ ၄၁ဦးရှိကာ ဆရာဝန်တစ်ဦးပါဝင်လာတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ကိုရီး ယား၊...
ဆီးချိုရောဂါရှိသူတို့ အမေးများသည့် မေးခွန်းနှင့် အဖြေများ
Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသိသူတွေမှာ ခြေမအနာဖြစ်ရင် ဖြတ်ပစ်ရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. ဆီးချိုသမားတွေက ခြေမအနာဖြစ်တာနဲ့တော့ မဖြတ်ပစ်ရပါဘူး။ ခြေမအနာဖြစ်ရင် ကိုယ်ရဲ့ခြေထောက်ကို မှန်ကိုကြည့်သလို နေ့တိုင်းကြည့်နေပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးရင်...
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်တို့ ပိုတက်စီယမ်လျော့နည်းစွာ ရရှိစေရန်
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဟင်းသီးဟင်းရွက်အားလုံးနီးပါးမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ပါပါတယ်။ တချို့တလေကတော့ ချက်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ရေထဲပါသွားတတ်ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ် ပါဝင်နှုန်းမြင့်မားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို လျော့နည်းအောင် ဆီနဲ့ကြော်တာ ချက်တာမလုပ်ခင်မှာ ရေလုံပြုတ်တာ၊ ရေနွေးဖျောတာလုပ်ပြီး အဲဒီရေတွေကို သွန်ပစ်လိုက်ပါ။ အာလူးနဲ့ အမြစ်စားရတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုတော့...